Antontan'isa momba ny fivarotana App App | Martech Zone
Alahady 20 Janoary 2019 Alahady 20 Janoary 2019 Douglas Karr
Ny fivoaran'ny rindranasa finday sy ny fitondran-tenan'ny mpampiasa fampiharana finday dia miova mandritra ny taona maro. Ny rafitra fampiharana finday dia manokatra varavarana ho an'ny orinasa mba hampitomboana ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa sy ny traikefa any an-dafin'ny tranonkala fitetezana nefa tsy manambola. Ireo mpampiasa finday dia manantena traikefa fampiharana avo lenta kokoa, ary rehefa manao izany izy ireo dia mirotsaka lalina amin'ireo marika izay manintona ny sain'izy ireo.
Ny salanisa mpampiasa fampiharana finday taona 18 ka hatramin'ny 24 dia mandany 121 ora isam-bolana amin'ny fampiasana rindranasa finday sy takelaka.
Ny lalao dia mitohy mitarika ny sokajy hafa rehetra amin'ny fisintomana, miaraka amin'ny 24.8% amin'ireo fampiharana rehetra ho lalao. Ny rindranasa orinasa dia faharoa faharoa, na izany aza, miaraka amin'ny 9.7% amin'ny fisintomana rehetra. Ary, ny fanabeazana no sokajy fahatelo malaza indrindra miaraka amin'ny 8.5% amin'ny fisintomana rehetra.
Antontan'isa fivarotana fampiharana finday fanampiny:
Amazon mitarika ny fampiharana finday rehetra miaraka amin'ny arivo taona, miaraka amin'ny 35% amin'ny fampiasana ny fampiharana.
Ireo mpampiasa smartphone dia mampiasa salanisa Rindrambaiko finday 9 isan 'andro.
Misy Fampiharana finday 7 tapitrisa misy eo anelanelan'ny Google Play, Apple's App Store, ary ny sehatra fivarotana app an'ny antoko fahatelo.
Misy 500,000 eo ho eo mpanonta fampiharana ao amin'ny Apple's App Store ary efa ho 1,000,000 ao amin'ny Google Play Store.
Ny tsirairay amin'izy ireo dia manome fotoana mety ho an'ny orinasa. Ny lalao dia afaka manome mpihaino mirotsaka an-tsehatra hanao doka sy hananganana fanentanana. Ny fampiharana raharaham-barotra dia afaka mampitombo ny fifamatorana sy ny sandan'ny mpanjifanao. Ny fampiharana fanabeazana dia afaka manangana fahatokisana sy fahatokisana amin'ny vinavinanao.
Ity infographic avy amin'ny ERS IT Solutions, App Stores amin'ny isa: Topimaso amin'ny tsena, manome antontan'isa vitsivitsy momba ny fitomboana, ny tombom-barotra ary ny fampiasana fampiharana finday sy ireo sehatra misy azy ireo - App Store ho an'i Apple, Google Play ho an'ny Android, ary Appstore ho an'i Amazon.
Fanangonana trosa ho an'ny fanombohana eCommerce: Ny torolàlana voafaritra
Ahoana ny fomba hanampiana ireo sora-baventy fampiharana amin'ny tranokalanao